पटक–पटकको आन्दोलनपछि ढोलाहिटी-सुनाकोठी सडक मङ्सिर दोस्रो सातासम्ममा कालोपत्रे गरिने
बिहिबार, मंसिर १८, २०७७ ०१:१३:५४ युनिकोड पुरानो वेबसाइट
रिहाईपछि पौडेलले भने- सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन
किटानी जाहेरी दिँदापनि बुवाको हत्यामा संलग्नहरुलाई कारबाही नगरिएको भन्दै छोरीहरु न्याय माग्दै
राजसंस्था स्थापनाको लागि मंसिर २० गते माईतीघरमा बृहत्त प्रदर्शन
ओलीलाई मंसिर २० गतेसम्म मात्रै पर्खने दाहाल–नेपालको तयारी
अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी गर्ने कट्टेल पक्राउ
कांग्रेस नेता पौडेल प्रहरी नियन्त्रणमा
बैठकमै ओली र प्रचण्डबीच आरोप प्रत्यारोप
सभा जुलुस नगर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको अनुरोध
म्याराडोनाको मृत्यु कसरी भयो ? उनको डाक्टरको घरमा प्रहरीले मार्‍यो छापा
बुधबार, कात्तिक २६, २०७७ खोजतलास
काठमाडौं । सडक विस्तारको क्रममा रहेको ढोलाहिटी–सुनाकोठी सडक आगामी मंसिर दोस्रो सातासम्ममा कालोपत्र गरिने भएको छ ।
तीन किलोमिटर लम्बाइको यो सडक कालोपत्र चाँडो हुनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयवासी पटक–पटक सडक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । कात्तिक मसान्तसम्ममा बेस (आधार) को काम सकाएपछि मंसिर १५ सम्ममा कालोपत्र सकिने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख गुरु अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीयवासीसँग निर्माण कम्पनीले निर्माण भइरहँदा दैनिक दुईपटक पानी खसालेर धुलो कम गर्ने सहमति भएको छ। उनले भने-तिहारलगत्तै कम्पनीले कालोपत्र शुरु गर्नेछ । सो खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सैलुङ निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका आयोजनाले जनाएको छ । सो सडकमा कालोपत्र चाँडो गर्नुपर्ने माग गर्दै गत असारमा स्थानीयवासीले सडक अवरुद्ध गरेका थिए । आयोजनाले पहिले तोकिएको मापदण्ड २० मिटर चौडाइमा निर्माण गर्न खोज्दा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ३ गतेको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सबै सडकमा उपलब्ध चौडाइमा नै कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेकाले सोहीअनुसार गर्न लागिएको हो । उनले भने-कुनै पनि संरचना नभत्काइ भएकै चौडाइमा कालोपत्र भइरहेको छ । ढोलाहिटी–लेले सडक विस्तार चार वर्ष पहिले शुरु भएको थियो ।
अहिले पनि टाखेल–लेलेलगायत चौडाइ उपलब्ध भएका स्थानमा मापदण्डानुसार नै विस्तार भइरहेको छ । आयोजनाले गत वर्ष नै ठेचोबाट टाखेलसम्मको सडक निर्माण गरेको थियो । उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका सडक छेउमा घर भएका स्थानीयवासीले घरलगायत संरचना भत्काउन नमानेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध बनेको थियो ।
जति चौडाइ उपलब्ध छ त्यसैमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयपछि भने आयोजनाले सबै सडकको निर्माण अघि बढाएको छ । आगामी पुससम्ममा सबै सडक सम्पन्न गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । पटक–पटक ठेक्काको अवधि थपिए पनि अब थप्न नमिल्ने भएकाले कम चौडाइमै कालोपत्र गर्न लागिएको हो । उपत्यकामा एकै वर्ष विस्तार शुरु भएका १० सडकमध्ये अहिलेसम्म एउटा पनि डिभिजन सडक कार्यालयमा हस्तान्तरण भइसकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २६, २०७७, १३:४०:००
रिहाईपछि पौडेलले भने- सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन ५ घण्टा पहिले
के हो थाइराइड ? समस्या र समाधानका उपाय बुधबार, मंसिर ३, २०७७